Xildhibaano: Caalamku ha joojiyo faragelinta uu ku hayo dowladda Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka xumaaday war dhawaan kazoo baxay Qaramada Midoobay, Midowga Yurub iyo ururu goboleedka IGAD ayaa beesha caalamka ugu baaqay iney dowladda Soomaaliya laga daayo faragelinta tooska ah.
Xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ee maanta kulanka ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa kulankooda waxa ay ka soo saareen baaq ay u jeedinayaan beesha caalamka, iyadoo baaqooda uu dabo joogo qoraal ay si wada jir ah uga soo baxay 27-kii bishaan Midowga Afrika, IGAD iyo Qaramada Midoobay.
Wasiirkii dastuurka ee dowladdii KMG ahayd, Xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in dalalka caalamku ay si aad ah Soomaaliya u taageereen, hase ahaatee aan loo baahneyn fara gelinta tooska ah ee xilliyada qaarkood lagu sameynayo hanaanka dowliga ah ee hadda jira, islamarkaana wax walba oo u dhexeeya ee hay’adaha dowladda lagu xalinayo gudaha dalka.
“Sida aad ogsoontihiin intii aan KMG ah ku jirnay ka soo bilaw 2000-2012 wixii khilaaf ah ee jira dibadda ayaa lagu soo xalin jiray, mar haddii aan ka gudubnay KMG-nimada, waxaan u aragnaa warqaddaasi mid feragelin ah, annagana sidaa aad ogtihiin baarlamaanka ayaa xalliyay, wixii jirana isaga ayaa xalinaya, warqadda aan soo saarnana waxey jawaab u tahay warqadda UN, EU & IGAD, beesha caalamka waxaan leenahay taageeradiina waad ku mahasantihiin, laakiin arrimaha siyaasadda hasoo fara gashanina” ayuu yiri xildhibaan C/raxmaan Xoosh Jabriil.
Guddoomiyaha gudiga ganacsiga iyo warshadaha baarlamaanka Soomaaliya, Xildhibaan Cabdullaahi Jaamac oo isna kulanka ka hadlaya ayaa xusay in xilligan ay hay’adaha dowladda ee jira, gaar ahaan fulinta iyo sharci dejintu ay awood u leeyihiin in wax walba oo quseeya dowladda ay xaliyaan, islamarkaana aan loo baahneyn sidii horey loo arki jiray ee ah faragelin ka timaada dhanka beesha caalamka.
“Beesha caalamka waan uga mahad celineynaa taageerada aya siiyaan dowladda Soomaaliya, laakiin ogolana meyno in Soomaaliya noqoto meel cid walba iska gacneysato” ayuu yiri xildhibaan Cabduullaahi Jaamac.
Prof. Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo ah xildhibaan iyo wasiir hore ayaa sheegay in marka loo fiiriyo marxaladihii KMG ahaa ee uu dalku soo maray iyo maanta ay u dhexeyso farqi weyn hanaanka dowladnimo ee dalka ka jirta, loona baahanyahay in beesha caalamku ay ixtiraamto qaranimada iyo madax-banaaninada Soomaaliya.
“Caalamka wuu ku mahadsan yahay taageerada ay siiyaan Soomaaliya ee ah xaga aadamiga, xaga dib u dhiska, geedi socodka hay’adaha dowladda, laakiin mar walba inuu lasoo boodo faragelin sida inuu wakiil naga yahay, oo weliba muujinaya inuusan niyad wanaag heynin ee raadinayoa daldalool” ayuu Prof. Cabdullahi Sheekh Ismaaciil.
27-kii bishaan May ayaa Qaramada Midoobay, Midowga Yurub & IGAD waxey Muqdisho kazoo saareen bayaan wadajir ah oo ay ku sheegeen inaan Soomaaliya mar kale xamili Karin is-mari-waa iyo khilaaf, waxeyna ku baaqeen in muranka siyaasadeed la xalliyo.
Maxkamadda ciidamada oo dil ku xukuntay rag loo heystay dilka gabar